Xildhibaan loo diiday inuu gurigiisa u hoyaado | KEYDMEDIA ONLINE
Xildhibaan loo diiday inuu gurigiisa u hoyaado
Xildhibaan Daahir Maxamuud Muuse, oo ka mid ah Baarlamaankii 10aad ee dhawaan waqtigiisu dhamaaday ayaa sheegay in hay’aadaha Amnigu ka hor is taageen inuu u hoyaado gurigiisa.
MUQDISHO, Soomaaliya - Daahir Maxamuud Muuse, oo saxaafadda kula hadalay Huteel Jaziira ayaa sheegay in amar ka soo baxay madaxda sare ee NISA loogu diiday inuu gurigiisa tago xalay, taas oo sababtay inuu dibad joog gurigiisa ka ahaado tan iyo shalay.
“Shalay galab gurigeyga markii aan damcay in aan tago, Ciidamada Nabad Sugidda ayaa I hor Is taagay, Markii aan ciidanka ku iri yaa amarkaa bixiyay, waxay ii sheegeen inuu yahay amar ka yimid saraakiisha sar sare”. Ayuu yiri Xildhibaan Daahir.
Wuxuu sidoo kale sheegay Xildhibaanku in ilaa hadda uusan tagin gurigiisa oo ay hor taagan yihiin ciidanada NISA, wuxuuna sharci darro ku tilmaamay sida ay ula dhaqmeen Madaxda Hay’adda nabad Sugidda.
Xildhibaan Daahir Maxamuud, wuxuu ka mid ahaa Xildhibaanadii hor istaagay in muddo kordhin loo sameeyo Sabtigii, Farmaajo oo muddo xileedkiisii dhamaaday 7 Feberaayo 2021.
Xildhibaan Daahir, wuxuu is weydiiyay, haddii Farmaajo iyo kooxdiisu Xilhibaanadii qaranka u diideen in ay guryahooda u hoyaadaan, sidey u ogolaanayaan in ay hirgaliyaan doorashooyin heshiis lagu yahay, loona aamini karaa?